WI-FI ကို ROUTER ကိုအပေါ်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်လုပ်နည်း - ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်ကို - 2019
ပုံမှန်အားဖြင့်, Wi-Fi ကိုအပေါ်စကားဝှက်များ၏ပြောင်းလဲမှု (သို့မဟုတ်မူအရမှတူညီသည်တစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်း) နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများ Wi-Fi ကို router များမကြာသေးမီကအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာကြပြီပေးထား, မကြာခဏအလုံအလောက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်း, မျိုးစုံကွန်ပျူတာများ, တီဗီနှင့်အခြား devices များရှိပါတယ်ဘယ်မှာအများအပြားနေအိမ်များ - ။ Router ကိုသတ်မှတ်မည်။
Router ကို၏ကနဦးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုပင် Wi-Fi ချိတ်ဆက်အပေါ်တစ်ဦးစကားဝှက်ကိုချပြီး, များသောအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုသငျသညျကိုဆက်သွယ်မှာထွက်သယ်ဆောင်နှင့်တခါတရံတွင် "သာအဖြစ်လျှင်လျင်မြန်စွာ" ကို set up ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့တချို့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ရှိသည် ...
ဤဆောင်းပါး၌ငါ (ဥပမာ, လူကြိုက်များထုတ်လုပ်သူ D-Link, etc TP-Link ကို, ASUS က, TRENDnet ၏နံပါတ်ယူ) ထိုအသေးစိတ်အချက်များကိုအချို့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် Wi-Fi ကို router ကိုအပေါ်စကားဝှက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောဆိုရန်လိုသည်။ ဒါ ...
ငါက Wi-Fi ကိုအပေါ်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသလား? ဥပဒေနှင့်အဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပြဿနာများ ...
ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှ Wi-Fi ကို router များအတွက် password ကိုပြောင်းခြင်း
1) မည်သည့် router ကိုတက် setting သည့်အခါလိုအပ်လျက်ရှိသောလုံခြုံရေး settings ကို
တစ်ဦး router ကို D-Link DIR-300, DIR-320, DIR-615, DIR-620, DIR-651, DIR-815) အတွက် (အရေးကြီးသောအပေါ်တစ်ဦးစကားဝှက် 2) အစားထိုး
3) router များ TP-LINK: TL-WR740xx, TL-WR741xx, TL-WR841xx, TL-WR1043ND (45ND)
4) ASUS ကမှာ Wi-Fi ကို router များဖွင့်သတ်မှတ်
5) TRENDnet router များအတွက် Wi-Fi ကွန်ရက်တက် Set
6) router များ ZyXEL - Wi-Fi ကိုပု ZyXEL Keenetic အပေါ် setting
7) Rostelecom ၏ Router က
စကားဝှက်ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်သင်၏ Wi-Fi ကွန်ရက်မှ devices များချိတ်ဆက်ခြင်း
Wi-Fi ကိုများအတွက် password ကိုမှန်ကန်စေသည်ဘယ်အရာကိုအဘယျကွောငျ့ကပြောင်းလို့ရပါသလား
Wi-Fi ကိုအဘို့အ Password ကိုတဦးတည်း chip ကိုပေးသည် - ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်သင် (သင်ကွန်ယက်ကိုထိန်းချုပ်) ဒီစကားဝှက်ကိုပေးသာဘယ်သူကိုမှသူတို့အားကကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤတွင်, များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏတွေးမိ: "ငါကွန်ပျူတာရှိသည်ကြောင့်ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိသောဖိုင်တွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဘယ်သူ crack ပါလိမ့်မယ်, အဲဒီစကားဝှက်တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူး ... " ။
တကယ်တော့သူကမရှိအချက်ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမကဤသို့ပွုလိမျ့မညျမဟုအသုံးပြုသူ 99% crack ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုနေဆဲထားရန်ထိုက်တန်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်:
စကားဝှက်ကိုမပါလျှင် - ထို့နောက်သင့် network ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အိမ်နီးချင်းများကိုချိတ်ဆက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ထိုသို့ပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အားလုံးဘာမှမ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင့်ချန်နယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး access ကိုမြန်နှုန်း (အပြင်အထူးသဖြင့်ချက်ချင်းအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားရန်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအသုံးပြုသူများကိုသတိထားမိ, "နှေး" ၏အမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မည်) နိမ့်လိမ့်မည်
သင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်တဲ့သူမည်သူမဆို - နိုင် (အလားအလာ) (မည်သည့်တရားမဝင်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့ဥပမာအားဖြင့်,) အကွန်ယက်မကောင်းတဲ့ဘာမှလုပ်သင်မေးခွန်းများကို (အာရုံကြောဆွဲကိုအလွန်တတ်နိုင်သမျှ ... ) ရှိစေခြင်းငှါဆိုလိုတာကသင့်ရဲ့ရဲ့ IP-address များထံမှ ။
ထိုကြောင့်ငါအကြံဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းစွာစကားဝှက်တစ်ခုထား, ဖြစ်နိုင်ရင်ပုံမှန်အတိုင်း brute အင်အားသုံးကောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းဦးတည်းဖြစ်စေ, တစ်ဦးကိုကျပန်းအစုံပါပဲ။
ချိုးသင်အထူးသဖြင့်မဖြစ်နိုင်တစ်စုံတစ်ဦးကို 2-3 ဂဏန်းတစ် password ကိုတင်ထားတော်မူမည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်းအလွန်အမင်းနှစ်လိုဖွယ်မဟုတ်ပေ။ မိနစ်ကိစ္စ၌ဤကာကွယ်မှုကိုချိုးဖျက်နှင့်ဆိုလို busting မဆိုအစီအစဉ်များကိုနောက်တဖန်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းအကျွမ်းတဝင်ကွန်ပျူတာများကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုအိမ်နီးချင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလုယူခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ...
ဒါဟာစကားဝှက်တွေသုံးစွဲဖို့မရသော် သာ. ကောင်း၏:
ကလေးမွေးဖွား, အိမ်ထောင်ရေး, အခြားမည်သည့်သက်ဆိုင်ရာရက်စွဲများ၏ရက်စွဲများ;
အရှည်ထက်လျော့နည်းအက္ခရာ 8 လုံး (အထူးသဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်ဂဏန်းထပ်ခါတလဲလဲတဲ့စကားဝှက်ကိုသုံးပါ: "11111115", "1111117" စတာတွေ) တည်းဟူသောဂဏန်းများ၏ password များကိုသုံးစွဲဖို့နှစ်လိုဖွယ်မ;
ကျနော့်အမြင်ရှိကပဲကွဲပြားခြားနားသော password များ (အလုံအလောက်အများအပြားရှိပါတယ်ရာ၏) မီးစက်သုံးစွဲဖို့မရသော် သာ. ကောင်း၏။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လမ်း: အထားသောစာပိုဒ်တိုများစဉ်းစားသင်မေ့လျော့မည်မဟုတ်ကြောင်း (ရာ၏အရှည် 10 ဇာတ်ကောင်ထက်လျော့နည်းမဟုတ်ပါဘူး) 2-3 စကားလုံးများကိုရှည်လျားသောဖြစ်ကြသည်။ ထို့နောက်ရုံ, ဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများကြီးအချို့စာလုံးများရေးရန်အနည်းငယ်နံပါတ်များကို append ။ စကားဝှက်ကိုဖေါ်ထုတ်ဖို့မှသာသင်တို့အဘို့သူတို့ရဲ့အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြုန်းဖို့မဖြစ်နိုင်နေသောရွေးကောက်ပြုပါလိမ့်မည် ...
အဆိုပါ WEP ကိုလက်မှတ်, WPA-PSK သို့မဟုတ် WPA2-PSK ကို Select လုပ်ပါ
သင့် router option ကိုထောကျပံ့ခဲ့လျှင် WPA2-PSK - မိမိနာမအကိုရွေးပါ။ ယနေ့အထိ, ဒီလက်မှတ်ကိုပိုကောင်းကြိုးမဲ့လုံခြုံရေးပေးပါသည်။
မှတ်ချက်: တန်ဖိုးနည်းမော်ဒယ်များ router များတွင် (ဥပမာ TRENDnet) ထိုသို့သောထူးဆန်း၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်: အ protocol ကိုပါဝင် WPA2-PSK - ကွန်ယက်တိုင်း 5-10 မိနစ်ခန့်ရပ်ဆိုင်းစတင်ခဲ့သည်။ (ကွန်ယက် access ကိုမြန်နှုန်းကန့်သတ်မဟုတျပါဘူးအထူးသဖြင့်လျှင်) ။ သငျသညျ access ကိုမြန်နှုန်းတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့လက်မှတ်နှင့်န့်အသတ်ကို select လိုက်တဲ့အခါ - ထို router ကိုအတော်လေးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်စတင် ...
encryption ကိုအမျိုးအစား TKIP သို့မဟုတ် AES
(- AES WPA2 အတွက်) WPA နဲ့ WPA2 လုံခြုံရေး mode ကိုအသုံးပြုကြသည်သောဤနှစ်ခုအစားထိုး encryption ကိုအမျိုးအစား။ အဆိုပါ router များကိုလည်းတွေ့ကြံ encryption ကို mode ကို TKIP + AES ရောစပ်နိုင်ပါသည်။
ငါ (ကပိုပြီးခေတ်မီသည်နှင့် သာ. ကြီးမြတ်ယုံကြည်စိတ်ချရပေးပါသည်) encryption ကို AES အမျိုးအစားကိုသုံးပြီးအကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလိုလျှင် (ဥပမာ, ဆက်သွယ်ရေး connection ကို setup ကိုကိုက်ဖြတ်သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်တာမှအစပြု) - TKIP ကိုရွေးချယ်ပါ။
1. လိပ်စာ bar မှာမဆိုခေတ်သစ်ကို web browser နဲ့ type ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း, router ကိုအတွက် configuration page ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်: 192.168.0.1
2. ထို့နောက် Enter ခေါက်ပါ, default အနေဖြင့်ဝင်ရောက်ရန်စအဖြစ် "ဟုအဆိုပါစကားလုံးကိုအသုံးပြုသည်admin ရဲ့"(ပုကိုးကားမရှိရင်) ကစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ!
3. သင်မှန်ကန်စွာအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်, browser က settings ကို (ပုံ။ 1) နှင့်အတူစာမျက်နှာ load သငျ့သညျ။ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုထူထောင်ပေးရန်, သင်အပိုင်းကိုသွားဖို့လိုအပ် Setup ကို မီနူး ကြိုးမဲ့ Setup ကို (ဒါ့အပြင်ပုံမှာပြထားတဲ့။ 1)
သင်္ဘောသဖန်း။ 1. DIR-300 - က Wi-Fi ကို setting များကို
စာမျက်နှာအောက်ခြေမှာ 4. နောက်တစ်ခုကဒီ Wi-Fi ကွန်ရက်များအတွက် password ကိုဖြစ်ပါတယ် (က string ကိုကွန်ယက်သော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ "Save settings ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့သတိရပါပြောင်းလဲနေတဲ့ပြီးနောက်။ သငျသညျလိုအပျကွောငျးစကားဝှက်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပါ။
မှတ်ချက်: ကွန်ယက် Key ကိုလိုင်းအစဉ်အမြဲတက်ကြွမည်မဟုတ်ပါ။ သင်္ဘောသဖန်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမြင်ရသည့် mode ကို select လုပ်ပါရန် "WPA / WPA2 ကြိုးမဲ့လုံခြုံရေး (တိုးမြှင့်) Enable" ။2။
သင်္ဘောသဖန်း။ D-Link ကို DIR-300 သည် router ပေါ်မှာ password ကိုချိန်ညှိခြင်း 2. ကို Wi-Fi ကို
သည်အခြားမော်ဒယ်များ D-Link router များအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော firmware နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပြီး, အရှင် settings စာမျက်နှာအထက်ပါထံမှအတန်ငယ်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် password ကိုအပြောင်းအလဲအလားတူထုံးစံ၌အရပ်ဌာနကြာပါသည်။
Router ကို TP-link ကိုသင့် browser ရဲ့ address bar မှာရိုက်ထည့်ပါ၏ setting ထည့်သွင်းရန် 1. : 192.168.1.1
2. အမျှနှင့် password များနှင့်ရဲ့ login, နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရိုက်ထည့် "admin ရဲ့"(ပုကိုးကားမရှိရင်) ။
တစ်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုထူထောင်ကို select (လက်ဝဲ) ကကြိုးမဲ့ပုဒ်မ, ကြိုးမဲ့လုံခြုံရေးကို item စေရန် 3. (ပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့။ 3) ။
မှတ်ချက်: မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ပို. ပို. အဆိုပါ TP-Link ကို router များပေါ်တွင်ရုရှား firmware ကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီ, ပြီးတော့ (အင်္ဂလိပ်နားမလည်သောသူတို့အဘို့) ပင်ပိုမိုလွယ်ကူက customize ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 3. TP-LINK ချိန်ညှိခြင်း
ထို့နောက် mode ကို "ကို WPA / WPA2 - Perconal" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အညီ PSK Password ကို, သင့်စကားဝှက်အသစ်ရိုက်ထည့်ပါ (ပုံ4ကိုကြည့်ပါ .. ) ။ ထိုအခါ (Router ကများသောအားဖြင့်က Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သင်ယခင်ကဟောင်းစကားဝှက်ကိုသုံးသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကွန်နက်ရှင်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်) က settings ကို save လုပ်ပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 4. TP-LINK Configuring - စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်။
အသုံးအများဆုံးနှစ်ခု firmware ကို, သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီ၏ဓါတ်ပုံများကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။
4.1) router များ ASUS ကRT-N10P, RT ကို-N11P, RT ကို-N12, RT ကို-N15U
192.168.1.1 (အကြံပြု browser များ: IE ကို, Chrome, Firefox, Opera က) ကို router ကို configuration ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ 1. လိပ်စာ
settings ကိုဝင်ရောက်ဖို့ 2. အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်: admin ရဲ့
3. Next ကိုသငျသညျ '' ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် "," အထွေထွေ "tab ကို select လုပ်ပါ, အောက်ပါသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်:
အဆိုပါ SSID သို့လယ်ပြင်တွင်, လက်တင်အက္ခရာများအတွက် type ကိုအလိုရှိသောကွန်ရက်အမည် (ဥပမာ, "ကျနော့်ကို Wi-Fi ကို");
authentication Method ကို: ကို select လုပ်ပါ WPA2-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ;
encryption ကို WPA - ထို AES တန်ဖိုးကို Select လုပ်ပါ,
pre-shared Key ကို WPA: (8 63 မှဇာတ်ကောင်ထံမှ) key ကို Wi-Fi ကွန်ယက်ရိုက်ထည့်ပါ။ ဤသည် Wi-Fi ကွန်ရက်များအတွက် password ကိုဖြစ်ပါတယ်.
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုတက်ချိန်ညှိခြင်းပြီးပြည့်စုံသည်။ ကိုကလစ်နှိပ်ပါ (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 5) button ကို "Apply" ။ ထိုအခါသင်သည် Router ကို Restart လုပ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ routers များကိုအပေါ် 5. တစ်ဦးက wireless network ကို setting များကို: ASUS က RT ကို-N10P, RT ကို-N11P, RT ကို-N12, RT ကို-N15U
4.2) router များ ASUS က RT ကို-N10E, RT ကို-N10LX, RT ကို-N12E, RT ကို-N12LX
အဆိုပါ setting ကိုဝင်ဖို့ 1. လိပ်စာ: 192.168.1.1
ယင်း setting တွင် 2. အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်: admin ရဲ့
"ကြိုးမဲ့ LAN" ကို select Wi-Fi- စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန် 3. (လက်ဝဲဘက်, ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 6) ။
အဆိုပါ SSID သို့လယ်လိုချင်သောကွန်ရက် (လက်တင်ရိုက်ထည့်ပါ) ၏အမည်ကိုထည့်သွင်း;
အဆိုပါ WPA Encryption မှာတော့: အ AES တန်ဖိုးကို Select လုပ်ပါ,
pre-shared Key ကို WPA: (8 63 မှဇာတ်ကောင်ထံမှ) key ကို Wi-Fi ကွန်ယက်ဝင်;
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုတက်ချိန်ညှိခြင်းပြီးပြည့်စုံသည် - ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Apply" နှင့် Router ကိုတစ်ဦးပြန်ဖွင့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းထားခဲ့တယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 6. Settings များ router များ: ASUS က RT ကို-N10E, RT ကို-N10LX, RT ကို-N12E, RT ကို-N12LX ။
Router ကို Setting ကိုဝင်ရောက်ဖို့ 1. လိပ်စာ (က default): //192.168.10.1
settings ကို (ပုံသေ) မှဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက် 2. အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်: admin ရဲ့
သင်အပိုင်း "ကြိုးမဲ့" Basic tab ကိုနှင့်လုံခြုံရေးဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့စကားဝှက်ကိုမသတ်မှတ်ပေးရန်3။ အနက်ရောင် (ပုံ 8 နဲ့ 9) ထိုအပြာ (ပုံ 7. ): အရှိဆုံး router များအတွက် TRENDnet EEPROM2တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကိုချိန်ညှိခြင်းတူညီသည်: သင့်ရဲ့စကားဝှက်အသစ်ပါဝင်သည်နှင့်ဆက်တင်များ (အောက်ကဓာတ်ပုံပြသ configuration ကိုဥပမာ) ကယ်ဖို့ရှေ့ KEY ကိုသို့မဟုတ် PASSHRASE လိုင်းအတွက်သင်လိုအပ်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 7. TRENDnet ( "အပြာ" firmware ကို) ။ router TRENDnet TEW-652BRP ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 8. TRENDnet (အနက်ရောင်သွင်း) ။ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုတက်ချိန်ညှိခြင်း။
သင်္ဘောသဖန်း။ 9. TRENDnet (အနက်ရောင်သွင်း) လုံခြုံရေး settings ကို။
Router ကို Setting ကိုဝင်ရောက်ဖို့ 1. လိပ်စာ:192.168.1.1 (အကြံပြု browser များက Chrome, Opera က Firefox ကို) ။
လက်လှမ်း 2. ဝင်မည်: admin ရဲ့
3. access ကိုများအတွက် password ကို: 1234
ရွေးချယ်မှုများ, သင်အပိုင်း "ကို Wi-Fi ကိုကွန်ယက်" tab ကို "Connection ကို" ကိုသွားကြဖို့လိုအပ်ပါက Wi-Fi ကိုကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုသတ်မှတ်ထားရန်4။
ကြိုးမဲ့ access point ကိုဖွင့်မည် - သဘောတူ;
ကွန်ရက်အမည် (SSID သို့) - ကဒီမှာသင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဖို့ကွန်ယက်၏အမည်ကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်;
SSID သို့ထုတ်လွှင့်သည်မဟုတ် - ကမဆိုလုံခြုံရေးပေးမထားဘူးပါဝင်သည်ဖို့မသည် သာ. ကောင်း၏;
စံ - ဥပမာ 802.11g ဟာ / n;
အရှိန် - အော်တို;
ရုပ်သံလိုင်း - အော်တို;
သင်္ဘောသဖန်း။ 10. ZyXEL Keenetic - ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် Setup ကို
သင် tab ကိုဖွင့်လှစ်လိုသည့်တူညီသောအပိုင်း "ကို Wi-Fi ကိုကွန်ယက်" အတွက် "လုံခြုံရေး။ " ယင်းနောက် setting များကိုအောက်ပါ:
စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း - WPA-PSK / WPA2-PSK;
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအမျိုးအစား - TKIP / AES;
Network မှ key ကို format နဲ့ - ASCII;
Network မှ Key ကို (ASCII) - ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝှက်ကို specify (သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုပြောင်းလဲစေ) ။
"Apply" ခလုတ်ကိုနှင့် Router ကတစ်ပြန်ဖွင့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 11 ZyXEL Keenetic ပေါ်တွင်စကားဝှက်ကိုပြောင်းခြင်း
Router ကို Setting ကိုဝင်ရောက်ဖို့ 1. လိပ်စာ: //192.168.1.1 (အကြံပြု browser များ: Opera က Firefox, Chrome က) ။
2. Username နှင့် access များအတွက် password ကို: admin ရဲ့
"ဟုအဆိုပါ WLAN Configuring" ဟုအဆိုပါအခန်းတွင် 3. Next ကို "လုံခြုံရေး" tab ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အလွန်အောက်ဆုံးမှ scroll ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မျဉ်း "ကို WPA password ကို" ၌ - သငျ (သင်္ဘောသဖန်းတွေ့မြင် 12 ။ ) တစ်ဦးစကားဝှက်အသစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 12. Rostelecom (Rostelecom) ၏ Router က။
သင် router ရဲ့ settings ကိုရိုက်ထည့်မနိုင်လျှင်, ငါအောက်ပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု:
သတိပေးခြင်း! သငျသညျကို Wi-Fi ကိုမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ကိရိယာကနေ router ရဲ့ setting များကိုပြောင်းလဲသွားပါလျှင် - သင်ကွန်ယက်ကိုအနက်ဆုံးသောတွင်းသငျ့သညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ့ Laptop ပေါ်တွင်မီးခိုးရောင်အိုင်ကွန်ကိုမီးရှို့နှင့် "ချိတ်ဆက်မ: ရရှိနိုင်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်" ပြောပါတယ် (ပုံ 13 ကိုကြည့်ပါ .. ) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 13. Windows ကို 8 - Wi-Fi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မသည်မရရှိနိုင်မယ့်ကွန်နက်ရှင်လည်းမရှိ။
အဘယ်သူသည်ဤအမှား fix ပါလိမ့်မယ် ...
စကားဝှက်ကိုအပြောင်းအလဲအပြီး Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း - က Windows 7, 8, 10
(Windows 7, 8, 10 အဘို့အရက်စွဲရန်)
သူတို့အဟောင်းကိုဆက်တင်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေအဖြစ်အားလုံးထုတ်ကုန်များတွင် Wi-Fi ကိုကျော်လာရောက်ပူးပေါင်းသငျသညျ, re-configure ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လာသောအခါအစားထိုး Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခု Windows စကားဝှက်ကို set up ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ရှိပါတယ်မထိပါလိမ့်မယ်။
1) ကို right-click မီးခိုးရောင်အိုင်ကွန်နှင့် menu ကိုချတစ်စက်ကနေ select လုပ်ပါ "Center ကကွန်ယက်နှင့်မျှဝေခြင်းရေးစင်တာ" (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 14) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 14. Windows ကို Taskbar - ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို adapter ၏ setting ကိုသွားပါ။
2) ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, လက်ဝဲကော်လံကို select ထိပ်တန်း - ပြောင်းလဲခြင်း adapter settings ကို။
သင်္ဘောသဖန်း။ 15. ပြောင်းလဲမှု adapter parameters တွေကို။
3) သင်္ကေတကို "ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်" တွင်, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် "Connect ကို" ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း 16 ။
4) Next ကိုတစ် window ကိုသငျသညျချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အားလုံးကိုရရှိနိုင်ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်စာရင်းတစ်ခုနှင့်အတူပေါ်လာမှာပါ။ သင်သည်သင်၏ကွန်ယက်ကို select ပြီးသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ စကားမစပ်ကို Windows အလိုအလြောကျအခါတိုင်းသူ့ဟာသူချိတ်ဆက်ရှိသည်ဖို့ box ကိုစစ်ဆေးပါ။
Windows 8 မှာတော့ - ဒီနဲ့တူလှပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း 17. ...
ထို့နောက်စနစ်ဗန်းထဲမှာ wireless network ကိုအိုင်ကွန် (ပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့။ 18) "အင်တာနက်ကိုလက်လှမ်းမီနှင့်အတူ" ဟုသောစကားနှင့်ရှို့ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 18. အင်တာနက် access ကိုအတူတစ်ဦးက wireless network ကို။
စကားဝှက်ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက် router ကိုမှစမတ်ဖုန်း (Android) နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသာ3ခြေလှမ်းများကြာနှင့်အလွန်မြန် (သင်မအောက်မေ့ကြပါလျှင်သင်သည်သင်၏ password နဲ့သင့်ကွန်ယက်၏နာမကိုမှတ်မိနေပါလျှင် - ။ ထို့နောက်ဆောင်းပါး၏အစအဦးကိုကြည့်ပါ) ။
1) ဟာ android များအတွက် setting များကိုဖွင့်ပါ - ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များတဲ့အပိုင်း, Wi-Fi ကို tab ကို။
သင်္ဘောသဖန်း။ 19. အန်းဒရွိုက်: Wi-Fi ကို configuration များ။
2) Next ကို Wi-Fi ကို (ကပိတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လျှင်) ရက်နေ့တွင်ဖွင့်, အောက်ပါစာရင်းထဲကသင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုအခါသင်သည်ကွန်ယက်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့စကားဝှက်ရိုက်ထည့်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 20. ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုများ၏ရွေးချယ်မှု
3) password ကိုမှန်ကန်စွာထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြပြီဆိုရင် - သင့်ကိုရှေးခယျြကွန်ယက်၏ရှေ့မှောက်၌မြင်ရပါလိမ့်မည်) ပုံ 21 ၌ရှိသကဲ့သို့ ( "ချိတ်ဆက်" .. ကိုယ့်ကို Wi-Fi ကွန်ရက်ရန်လက်လှမ်းပြ, ထိပ်ပေါ်မှာသေးငယ်တဲ့ icon ကိုမြင်ရကြ၏။
သင်္ဘောသဖန်း။ 21. ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နေသည်။
အဆိုပါ sim တွင်ကျွန်မဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့ကို Wi-Fi ကိုလုနီးပါးအရာအားလုံးကိုရန်စကားဝှက်ကိုသိသောထင်နှင့်လမ်းဖြင့်ငါ (အထူးသဖြင့်အချို့ကိုသင်ဟက်ကာနေထိုင်ခဲ့သည့်ရပ်ကွက်အတွင်းလျှင်) ထိုသူတို့အစားထိုးအခြိနျမှနျမှအကြံပြု ...
လူအားလုံးတို့သည်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ နိုးထကိုအလွန်တန်ဖိုးထား - ဆောင်းပါးများအပေါ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်မှတ်ချက်များ for ။
2014 ခုနှစ်ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေကတည်းက။ - အပိုဒ်လုံးဝ 6.02.2016g ဒီဇိုင်း။
ဗီဒီယို Watch: ASUS. http: . Configure ASUS Wi-Fi Router (စက်တင်ဘာလ 2019).